You are here: Pyidaungsu Myanmar Mini-Encyclopedia / To A Better Health Article Collection / Medicines / Vitamin K အကြောင်း သိ ကောင်း စရာ
Vitamin K အကြောင်း သိ ကောင်း စရာ အပိုုင်း ၁
ဘာသာပြန် ပေး ရ မယ် ဆိုု ရင် -----
အခုု ဖော်ပြ မည့် ကိုုုုးကား ချက် က တော့ American Heart Association မှ ဖြစ် ပါ တယ်။
Vitamin K နဲ့ ပတ်သက် ပြီး အခုု လိုု ငြင်း ခုုန် စရာ မရှိ တော့ သည့် အချက် အလက် များ ထုုတ် ပြန် ထား သော် လည်း၊ ဆရာဝန် အများစုု ဟာ အရေး မထား ပဲ သက်ကြီး ရွယ် အိုု လူနာ များ ကိုု သွေးကြော များ ၌ ထုုံးဓာတ် စုုပုုံ မှု မှ နေ ပြီး ကာ ကွယ် ခြင်း မ ပေး သေး ပါ။
American Heart Association က ဘယ် လိုု ပြော သလဲ ဆိုု တော့ -------
အသက်၆၀ ကျော် အရွယ် လူ အများစုု ရဲ့ ပင်မ သွေးကြော ကြီး တွေ ထဲ မှာ တစတစ နဲ့ စုု ပုုံ လာ ပြီး ကြီး မား လာ တဲ့ ထုုံးဓာတ် တွေ ရှိ တတ် ပါ တယ်။
ထုုံးဓာတ် ပုုံ လာ တာ နဲ့ အမျှ ပင်မ သွေးကြော ကြီး ရယ်၊ သွေးလွှတ် ကြော ( aorta and arteries ) တွေ ဟာ ပင်ကိုုယ် ဆန့်ကျုံ့သတ္တိ ( elasticity ) တွေ ကျ ဆင်း လာ ပါ တယ်။ တစ်နည်း ပြော ရ ရင် သွေးကြော တွေ ဟာ ကျစ်လစ် ပြီး တောင့် တင်း လာ ပါ တယ်။
ဒီ လိုု ဖြစ် လာ တာ နဲ့ အမျှ သွေးတိုး၊ hypertension
နှလုုံး အဆိုု့ ပေါက် ကျဉ်း ခြင်း aortic stenosis
နှလုုံး ကြီး လာ ခြင်း cardiac hypertrophy
နှလုုံးသွေးကြော ပိတ် ခြင်း ကြောင့် နှလုုံး ကိုု သွား သည့် သွေး ပမာဏ လျော့ ပါး လာ ခြင်း myocardial ischemia
နှလုုံး ကောင်း စွာ အလုုပ် မလုုပ် နိုုင် တော့ ခြင်း congestive heart failure တွေ ဖြစ် လာ ကြ ပါ တယ်။
ထုုံးဓာတ် တွေ ပုုံ လာ တာ နှင့် အမျှ၊ နှလုုံး နှင့် နှလုုံးသွေးကြောပိတ်ဆိုု့ သည် နှင့် အမျှ နှလုုံး ရောဂါ မျိုးစုုံ ကြောင့် ခံစား မှု ဝေဒနာ များ၊ နှလုုံး ရောဂါ ကြောင့် အသက် သေ ဆုုံး ခြင်း စ သည် တိုု့ ဖြစ် မှာ ကိုု ဟောကိန်း ထုုတ် နိုုင် ပါ တယ်။
“Most individuals aged over 60 years have progressively enlarging deposits of calcium mineral in their major arteries.
This vascular calcification reduces aortic and arterial elastance, which impairs cardiovascular hemodynamics, resulting in substantial morbidity and mortality in the form of hypertension, aortic stenosis, cardiac hypertrophy, myocardial and lower-limb ischemia, congestive heart failure, and compromised structural integrity.
The severity and extent of mineralization reflect atherosclerotic plaque burden and strongly and independently predict cardiovascular morbidity and mortality.”
ဆက် ပါ ဦး မည်။
Vitamin K အကြောင်း သိ ကောင်းစရာ အပိုုင်း ၂
Vitamin K သုုံးမျိုး ရှိ ပါ တယ်။
၁. Vitamin K1 ( Phylloquinone )
အဓိက အား ဖြင့် အပင်ငယ် မျိုး (plants ) မှ ရ ပါ တယ်။
နောက် တစ်မျိုး ပြော ရ ရင်၊ အရွက် များများ စား လေ့ ရှိ သူ တွေ အရွက် မှ နေ ပြီး K1 တွေ ရ နိုုင် ပါ တယ်။
အရွက် ကြိတ် ရည် ကိုု သောက် သည့် သူ များ လည်း၊ အတော် များများ ရ နိုုင် ပါ တယ်။
ခန္ဓာကိုုယ် ထဲ ရောက် သွား သည့် အခါ မှာ၊ အချို့ သော Vitamin K1 ဟာ K2ပြောင်း လဲ သွား ပါ တယ်။
သိုု့ ပါ သော် လည်း၊ ပြောင်း လဲ သည့် ပမာဏ ကိုု သွေးကြော ထဲ မှာ ထုုံးဓာတ် မစုုပုုံ ရ အောင် အား ကိုုး လိုု့ မရ ပါ။
အချို့သုုတေသန တွေ က တော့ ပြော ပါ တယ်။ Vitamin K 1 ဟာ လည်း အထိုုက် အလျောက် တော့ ထုုံးဓာတ် စုုပုုံ ခြင်း မှ ကာကွယ် ပေး ပါ တယ် တဲ့။
၂. VitaminK2( MK-4 )
MK-4 ဟာ အသား၊ ကြက်ဥ၊ နွားနိုု့ က နေ ရ နိုုင် ပါ တယ်။ ကလီစာ ထဲ မှာ လည်း အများ ကြီး ပါ ပါ တယ်။
ဒီ ဗီတာမင် ဟာ အရိုုးကျန်းမာရေး ကောင်း ရ အောင် အကျိုး ပြု သည့် နေ ရာ မှာ တုုသေသန၊အလေ့လာထားဆုုံး ဗီတာ မင် ဖြစ် ပါ တယ်။
သောက် ပြီး ရင် ခန္ဓာကိုုယ် က လျင်မြန်စွာ စုုတ်ယူ သွား ပြီး၊ လျင်မြန်စွာ ပဲ စွန့် ထုုတ် လိုုက် ပါ တယ်။
၃. Vitamin K2( MK -7 )
သူ က တော့ ဘယ် က ရ သလဲ ဆိုု ရင် အချဉ်ဖောက် ထား တဲ့ ပဲပိစပ်၊ fermented cheeses တွေ မှ ရ နိုုင် ပါ တယ်။
သူ့ ရဲ့ ထူးခြား ချက် က တော့၊ စားသောက် ပြီး ရင် ခန္ဓာကိုုယ် ထဲ မှာ ၂၄ နာရီ ကျော် နေ၊ နေ ပြီး ခန္ဓာကိုုယ် ကိုု အကျိုး ပြု ပါ တယ်။
အထူးသဖြင့် ထုုံဓာတ် တွေ ကိုု လျော့ ပါး စေ လိုု သည့် အခါ ဒီ အချက် က အလွန် အရေးကြီး ပါ တယ်။
အစိုုးရ ပြဌာန်း ချက် အရ၊ လူရွယ် နှင့် သက်ကြီး သူ တွေ အတွက် Vitamin K ကိုု 90 – 120 mcg ပဲ လိုု တယ် လိုု့ ပြော ပါ တယ်။
ဒီ ပမာဏ ဟာ သွေး ခဲ ဖိုု့ နေ ရာ မှာ လုုံ လောက် သော် လည်း၊ သွေးကြောမကြီး နဲ့ သွေးလွှတ်ကြော တွေ မှာ ထုုံးဓာတ် စုုပုုံ ခြင်း မှ မကာကွယ် နိုုင် ပါ။
Vitamin K ဗဟုုသုုတ အပိုုင်း ၃
လူနာ တစ် ယောက် က မေး လာ ပါ တယ်။
” ဆရာမ ရှင့် -------- Vitamin K သောက် ရင် သွေ ခဲ တတ် တယ် ကြား လိုု့ ရှင်း ပြ စေ ချင် ပါ တယ် ”
ဆရာဝန် အတော် များ များ လည်း လူနာ တွေ သောက် နေ တာ တွေ့ ရင် အတင်း လိုုက် ပြီး ရပ် ခိုုင်း ကြ ပါ တယ်။ မသောက် ကြ နဲ့၊ သွေး တွေ ခဲ ကုုန် လိမ့် မယ် လိုု့ ပြော လေ့ ရှိ ကြ ပါ တယ်။
VitaminK1 ဟာ သွေးခဲ ဖိုု့ အတွက် လိုု အပ် သော ဓာတ် ဖြစ် ပါ တယ်။
VitaminK1 and K2 သွေးခဲ ရန် လိုု အပ် တဲ့ ပရိုု တင်း ဓာတ် တွေ ကိုု ခလုုပ်ဖွင့် ပေး တာ တော့ ဟုုတ် ပါ တယ်။ ဆရာဝန် တွေ နား လည် ရ အောင် ( factor 2, 7, 9, 10 )
VitaminK1 K2 ကိုု များများ သောက် ခြင်း အား ဖြင့် သွေးခဲ စေ တတ် တဲ့ ပရိုုတင်း ဓာတ် ကိုု အလွန် အမင်း ခလုုပ် မဖွင့် ပေး ပါ။ ( overactivate မလုုပ် ပါ )
မသောက် သင့် သော သူ များ က တော့ သွေးကြဲဆေး သောက် နေ သူ များ ဖြစ် ပါ တယ်။
ကျွန်မ လဲ Vitamin K1, K2 သောက် နေ သော သူ များ သွေး ခဲ ခြင်း ကြောင့် ဒုုက္ခ ဖြစ် တဲ့ လူနာ တွေ လဲ၊ medical literature မှာ သွား ရှာ ကြည့် တာ မ တွေ့ ပါ။
ကျွန်မ တိုု့ သောက် နေ ကြ တဲ့ super K ထဲ မှာ အဓိက ကပါ တာ က တော့၊
K1 1500 microgram
K2 ( MK4 ) 1000 microgram
K2 ( MK7 ) 200 microgram
ဖြစ် ပါ တယ်။
K2 MK7 ဟာ ခန္ဓာကိုုယ် ထဲ မှာ ၂၄ နာရီ ခံ ပါ တယ်။
K1 ဟာ အဓိ က သွေး ခဲ ဖိုု့ ဖြစ် သော် လည်း ---
Overactivate မဖြစ် တတ် တာ ကြောင့် စိုုးရိမ်စရာ မ ရှိ တာ က တစ် ကြောင်း၊
K1 ဟာ ခန္ဓာကိုုယ် ထဲ မှ အထိုုက် အ လျောက် K2 ကိုု ပြောင်း တာ က တစ် ကြောင်း
သူ ကိုုယ် တိုုင် က လည်း ထုုံးဓာတ် များ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် တဲ့ နှလုုံးရောဂါ၊ သွေး တိုုးရောဂါ က နေ ကာ ကွယ် ပေး တာ ကြောင့်၊ အား လုုံး ပါ တာ ကိုု သောက် သင့် ပါ တယ် လိုု့ ပြော ပါ တယ်။ ( K1 K2 ( MK4 and MK7 )
အခုုခေတ် မှာ သွေးတိုုး ၊ နှလုုံးရောဂါ အလွန် များ တာ မိုု့ superK ကိုု သောက် ရင် ကိုုယ့် ကိုုယ် ကိုု ကောင်း ကျိုး ပေး ရာ ရောက် တယ် လိုု့ ကျွန်မ ယူဆ ပါ တယ်။
ကျွန်မ သောက် နေ တာ ၅နှစ် ကျော် ပါ ပြီ။
အထူး သဖြင့် VitaminD3 အများ ကြီး သောက် တဲ့ အခါ၊ superK ကိုု အထိုုက် အလျောက် လိုု အပ် သ လိုု လိုုက် သောက် ပါ တယ်။
ယနေ့ အထိ တော့ ကျန်းမာ နေ ဆဲ ပါ ပဲ လိုု့ ထင် ပါ တယ်။
သွေး တွေ လဲ ခဲ မကုုန် သေး ပါ။
နောက် ဆုုံး ကြ တော့ မိမိ ဉာဏ် နဲ့ ပိုုင်း ခြား ဆုုံး ဖြတ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
သောက်၊ မသောက် သင့် ဆိုု တာ ကျွန်မ၊ မ ပြော လိုု ပါ။
မိမိ ဆရာဝန် ညွှန်ကြား တဲ့ အတိုုင်း လိုုက် နာ ရင် လည်း ရ ပါ တယ်။
ကျွန်မ အနေ နဲ့ က တော့ ဗဟုုသုုတ ပေးရုုံ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။
မိတ်ဆွေ များ အား လုုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကြ ပါ စေ။